सुजिताको घटना अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी भन्छन्, बाहिरका मान्छे आएर यहाँ के गरिरहेका छन् ? हामीलाई सुजिताको परिवार भेट्न समेत दिँदैनन् – GALAXY
काठमाडौ । सुजिता भण्डारीको मृत्युको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको चितवन प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा आफुहरु निकै समस्यामा परेको बताएका छन् । घटना अनुसन्धानमा अवरोध सिर्जना भएको भन्दै उनीहरुले वाहिर जिल्लाका मान्छे आएर के गरिरहेका छन् ?
भन्ने प्रश्न समेत गरे । सुजिता हराए देखि नै उनको परिवारसंग सम्पर्कमा रहेको बताएको प्रहरीले उनको शव फेला परेपछि वाहिरका मानिसको अनावश्यक हस्तक्षेप भएर आफुहरुलाई अनुसन्धानमै समस्या भएको बताएका छन् ।
विहिवार सो घटनाका बारेमा भएको प्रगति सुनाउन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरीले सुजिताको परिवारसम्म आफुहरुलाई पुग्न पनि नदिइएको गुनासो गरेका छन् । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जिल्ला प्रहरीका प्रमुख एसपी ओमप्रसाद अधिकारीले भने दुखका साथ भन्नुपर्छ हामिले सुजितालाई त बचाउन सकेनौं तर उनलाई न्याय दिने काममा पनि प्रहरीलाई सहज वातावरण छैन ।
उनले न्याय प्राप्तिको प्रक्रिया चलिरहँदा त्यसलाई पूरा गर्नमा अवरोध खडा गरिएको बताए। उनले अवस्था विगार्ने, जिल्ला वाहिरका मानिस आएर चितवनका होटलमा बसेर पर्चा र पम्प्लेट बनाउँदै अवस्था विगार्ने काम गरेको उनले बताए । अहिले अनुसन्धान गर्ने काममा ब्यस्त हुनुपर्ने प्रहरी कर्फ्यू व्यवस्थापनमा खट्नुपरेको बताए।
ती मान्छे को हुन् भन्ने नखुलाइ उनले भने, ‘काठमाडौंमा फ्लेक्स प्रिन्ट गरेर पोको पारेर, यहाँ बास बसी समूह तयार पारेर अनुसन्धानमा अवरोध गरिएको छ।’ उनले सुजिताको परिवार भने आफुहरुको अनुसन्धान प्रति सन्तुष्ट नै रहेको आफुले पाएको भएपनि अन्य ब्यक्तिहरुले उनीहरुलाई पनि उ त्ते जित पार्ने कोशिष गरिरहेको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा एसपी अधिकारीले असार ११ गते सुजिता र परिवारका सदस्यबीच मोबाइलमा पटक–पटक कुराकानी भएको पाइएको बताए। सुजिताले मोबाइलमा ‘डाटा प्याक’ समेत लिएको अनुसन्धानमा भेटिएको छ। जिल्ला प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाइरहेको र पोस्टमार्टमको भिसेरा रिपोर्ट आएपछि थप कुरा आउने उनले बताए। पोस्टमार्टमको प्रारम्भिक रिपोर्टमा सुजिताको मृत्युको स्पष्ट कारण खुलेन ।